June 2018 – Sajha Party
माइतीघर मण्डलामा सरकारको धरपकड, निर्णय लागु नहुँदै गरियो पक्राउ
काठमाडौं । सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको विरोधमा प्रर्दशन गर्न गएकाहरु विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक उज्जवल थापा, केन्द्रीय सदस्य शशिबिक्रम कार्कीसहित एक दर्जन पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ परेकाहरुलाई महानगरीय प्रहरी परिसर सिंहदवार लगिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
माइतघर मण्डलालगायतका क्षेत्रमा प्रर्दशन तथा धर्ना गर्न नपाउने सरकारको निर्णयपछि यसको आलोचना भएको थियो ।
यहीक्रममा आज सरकारी निर्णयको विरोधमा प्रर्दशन गर्न माइतीघर मण्डला गएकाहरु पक्राउ परेका हुन् । उनीहरुले नागरिकको हक खोस्न नपाइने माग गरेको थिए ।
काठमाडौंको शान्ति बाटिका र माइतीघर मण्डलामा आगामी साउन १ गतेदेखि सरकारले भेला हुन् र विरोध प्रदर्शन गर्न समेत रोक लगाएको थियो ।
बिहिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले माईतिघर र शान्तिबाटिका लगायत उपत्यकामा यसअघि नारा–जुलुस हुने क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
गृहमन्त्री थापाले साउन १ गतेबाट सरकारको निर्णय लागु हुने बताएका भएपनि त्यसभन्दा पहिला नै पक्राउ गरिएको छ ।
सरकारले तोकेको स्थानभन्दा बाहेक अन्यत्र विरोध प्रदर्शन गरेमा साउन एक गतेदेखि स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गर्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले बताएका छन् ।
(साभार: रातोपाटी, असार १६, २०७५)
Police arrest BSP’s leaders after staging protest in ‘prohibited area’
(Published: myRepublica, June30, 2018)
माइतिघरमा प्रदर्शन, उज्वल थापासहित ९ जना पक्राउ
१६ असार, काठमाडौं । सरकारद्वारा निषेधित माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने विवेकशील साझा पार्टीका ९ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पार्टीका एक संयोजक उज्ववल थापासहितलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखिएको अर्का संयोजक रवीन्द्र मिश्रले जानकारी दिएका छन् ।
‘बिनाकारण शान्तिपूर्णरुपमा विरोध गर्न पाउने अधिकार कुन्ठित गर्नु अधिनायकवादी चरित्रको प्रारम्भिक संकेत हो,’ मिश्रले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
शनिबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा सो पार्टीले निषेधित क्षेत्रको घोषणा अवज्ञा गरेको थियो । पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो ।
सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि ७ वटा स्थान तोकेर अन्तय यस्तो कार्य गरेमा कानूनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । २०७४ चैत ३० गते काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिको वैठकले प्रदर्शनका लागि स्थान तोकेको थियो ।
काठमाडौंको खुलामञ्च, लैनचौर समाज कल्याण परिषद अगाडि, सिफल चौर, पेप्सीकोला खेल मैदान, भुईंखेल चौर र तीनकुने चौरमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न दिने सरकारको निर्णय छ ।
(साभार: अनलाइनखबर, असार १६, २०७५)
माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने विवेकशील साझाका संयोजकसहित १० पक्राउ
काठमाडौं : राजधानीको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्ने १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। निषेधित क्षेत्रमा धर्ना बस्न लागेका विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक उज्ज्वल थापासहित १० जना पक्राउ परेकाे महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई सिंहदरबार वृत्तमा राखिएको छ।
प्रदर्शनकारीहरू ‘डा. गोविन्द केसी समर्थक समूह’ को ब्यानरमा थिए। सरकारले साउन १ गतेदेखि विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित ठाउँ तोकेको थियो। राजधानी उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा तोकिएका ठाउँमा मात्र सभा र प्रदर्शन गर्न पाइने भएपछि सरकारी निर्णयको विरोध भएको छ।
(साभार: अन्नपुर्ण पोस्ट, १६ असार २०७५)
माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने विवेकशीलका संयोजकसहित ९ जना प्रहरी नियन्त्रणमा
प्रहरीले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने विवेकशील साझा पार्टीका संयोजकसहित ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
संयोजक उज्जवलथापा सहित ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिइ वैद्यखानामा राखिएको विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मिलन पाण्डेले बताए।
‘शान्तिपूर्ण तवरले विरोध प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो, यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको छ,’उनले भने।
शनिबार माइतीघर मण्डलामा उनीहरूले नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न दिँदैनौं, निषेधित क्षेत्र घोषणा अवज्ञा गर्छौं, अधिकारकै लागि लड्छु भन्ने अनि आफैं नागरिकको अधिकार खोस्नेलगायतका पम्प्लेट लिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि सरकारले तोकेको ७ ठाउँबाहेक अन्त त्यस्ता कार्य गरेमा कानूनी कारवाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिँदै आएको छ।
२०७४ चैत ३० गते काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले प्रदर्शनका लागि स्थान तोकेको थियो।
खुलामञ्च, तीनकुने चौर, भुइँखेल चौर, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरण, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडि र सिफल चौरमा विरोध सभा गर्न मिल्ने निर्णय भएको थियो भने माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो।
(साभार:सेतोपाटी, असार १६, २०७५)
माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने पक्राउ
काठमाडौँ — सरकारले निषेधित क्षेत्रमा विरोध तथा प्रदर्शन गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ ।
माइतीघर मण्डलामा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको हुबहु प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारलाई दबाब दिन र नागरिक स्वतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्दै काठमाडौंलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा प्रदर्शन गरिरहँदा प्रहरीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरेको पार्टी केन्द्रीय सदस्य मिलन पाण्डेले बताए ।
उनका अनुसार पार्टी संयोजक उज्ज्वल थापा, केन्द्रीय सदस्य शशीविक्रम कार्की, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका ९ जना नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाहरुलाई सिंहदरबार वैद्यखानास्थित सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा राखिएको छ ।
अहिलेपनि माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन जारी छ ।
(साभार: कान्तिपुर, असार १६, २०७५)
गत १० वर्षदेखि वैकल्पिक राजनीतिको अभियान चलाउँदै आएका तथा गत दुई वर्षदेखि नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको उच्च नेतृत्वमा रहेका केशव दाहाल उक्त पार्टी परित्याग गरि विवेकशील साझा पार्टीको उच्च नेतृत्वमा संलग्न भएका छन्।
उनले “जति प्रयत्न गरे पनि नयाँ शक्ति पार्टीबाट वैकल्पिक राजनीतिको लक्ष्य हासिल हुनै नसक्ने” निश्कर्षमा पुगेपछि करिव १० दिनअघि उक्त पार्टीबाट राजीनामा दिएका थिए।
केशव दाहाल नेपालको प्रगतिशिल, लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक मञ्चहरुमा करिब दुइ दशकदेखि सक्रीय छन्।
नेपालको लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र सम्बृद्धिको अभियानमा सहभागी हुँदै २० भन्दा बढी मुलुकहरुमा आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य अभियानहरुको नेतृत्व गर्दै अवधारणापत्र र विचारहरु प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको अपरिहार्यता सम्बन्धि बहसको उठान हुनु निकै अगाडि नै दाहाल समेतको मुख्य नेतृत्वमा २०६३ सालमा ‘वैकल्पिक विचार मंच’को गठन गरिएको थियो।
सो मञ्चले नेपालको राजनीतिभित्र र बाहिरका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई संलग्न गराएर वैकल्पिक राजनीतिको बारेमा चर्चा, छलफल, अन्तक्र्रिया र प्रकाशनहरु गर्दै आइरहेको थियो। दाहालको ‘नेपाली राजनीतिको पूनर्गठन’ नामक पुस्तक प्रकाशित छ।
उनले अन्य विभिन्न पुस्तकहरुमा सहलेखन र सम्पादन गरेका छन् जसमध्ये ‘वैकल्पिक विचार मन्च’द्धारा प्रकाशित ‘संघीयता र पुर्वीतराई’ तथा ‘लोकतन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्म’ मुख्य छन्।
उनी नेपालका प्रमुख पत्रपत्रिकाहरूमा नियमतिरूपमा स्वतन्त्र लेखन पनि गर्दछन्। दाहालले वैकल्पिक राजनीतिलाई संस्थागत गर्दै देशको रूपान्तरण गर्ने आफ्नो अटुट प्रयास विवेकशील साझासँगको सहयात्राबाट बल्ल टुङ्गोमा पुग्ने आशा बढेको बताए।
यसअघिको आफ्नो राजनीतिक यात्रामा साथ दिने सबैप्रति उनले आभार प्रकट गरेका छन्।
विवेकशील साझाका संयोजकद्वय रवीन्द्र मिश्र तथा उज्वल थापाले दहालजस्तो वैकल्पिक राजनीतिको अगुवा, बुद्धिजीवी तथा नेता विवेकशील साझामा सहभागी हुँदा पार्टी तथा राष्ट्र निर्माणको अभियान अझ बलियो हुने बताएका छन्।
मिति: ०८ असार २०७५
विवेकशील साझा पहिलो अपाङ्गतामैत्री पार्टी कार्यालय
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टी नेपालकै पहिलो अपाङ्गतामैत्री पार्टी कार्यालय बनेको छ । पुराना पार्टी कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को पार्टी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएको अवस्थामा विवेकशील साझा पार्टीले यसको शुरूआत गरेको हो ।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका– २०६९’ ले सबै सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउन अनिवार्य त गरेको छ तर यसको परिपालना भएको छैन ।
बाटोघाटो र सरकारी कार्यालय भौतिक संरचनासमेत अपाङ्गतामैत्री नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलले स्वयम्ले त्यसको थालनी गर्नुपर्ने सन्देश दिन भवन अपाङ्गतामैत्री बनाइएको पार्टी प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार विज्ञसमेत रहका आचार्यले समावेशी लोकतन्त्र कागजमामात्र सीमित हुननहुने र राजनीति दलले नै त्यसको अक्षरशः पालाना गर्नुपर्ने धारणा राखे । “हामीले भवनमात्रै अपाङ्गताम ैत्री बनाएका छैनौँ । पार्टीका निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पहुँचको सुनिश्चितता गरेका छौँ,” उनले भने ।
पछाडि पारिएको अपाङ्गता क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन विवेकशील साझाले सन्देश प्रवाह गरेको उनको भनाइ थियो । “हामीले पार्टीका हरेक निकाय र संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचको सुनिश्चिता गरेका छौँ । राज्यका नीति नियम दलले नै पालना नगर्ने हो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन,” उनको टिप्पणी थियो ।
कार्यालय सहयोगी पनि ‘ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता’
त्यस्तै विवेकशील साझाले पार्टी कार्यालयको सोधपुछ कक्षमा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता राखेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच हरेक ठाउँमा पुगोस् र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत यसले दबाब सिर्जना गरोस् भनेर पार्टीले ह्विलचेयर प्रयोगकर्तालाई सोधपुछ कक्षमा राखेको आचार्यको भनाइ छ ।
कार्यालयको सोधपुछ शाखा रामेछापकी लक्ष्मी घिमिरेले सम्हालेकी छन् । भीरबाट लडेर कम्मरमुनिको भाग नचल्ने उनी ह्विलचेयरको सहायताले कार्यालय आउजाउ गर्छिन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले नै अगाडि ल्याउनुपर्ने बताउँदै ह्विलचेयर प्रयोगकर्तालाई विवेकशील साझा पार्टीले अवसर दिनु सुखद शुरूआत भएको बताइन् ।
त्यस्तै उनले अन्य पार्टीले पनि राम्रो कुराको अनुशरण गरे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पार्टी कार्यालयसम्म पुग्ने धारणा राखिन् ।
छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धमा विवेकशील साझा
नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको एक दशक विति सक्दा पनि छुवाछुत तथा जातिय भेदभावको मार खेपिरहेका दलित समुदायको ठुलो संख्याले अझै पनि विभेद मात्रै होईन हत्या समेत वेहोर्नु परिरहेको घटनाप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।
विवेकशील साझा पार्टी छुवाछुत तथा जातिय विभेदप्रति आफ्नो शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छ।
जेठ महिना भित्र मात्रै कालिकोट नरहरिनाथ गा“उपालिकाकी जनप्रतिनिधि मना सार्कीको हत्या, झापाको श्री कृष्ण द्वैपायन वेद विद्याश्रममा दलित समुदायको विद्यार्थीलाई जातिय कारण देखाई भर्नानै अस्विकृत देखि सभासद कलुदेवी विश्वकर्माले जातिय विभेदकै कारण एक महिना देखि राजधानीमा डेरा भाडा समेत नपाएको कुरा संसदमै राख्नुपर्ने अवस्थाप्रति हाम्रो पार्टी संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौ।
सार्वजनिक भएका यस प्रकारका घटनाले नेपाली समाजमा जकडिएर रहेको छुवाछुत कुप्रथाको वास्तविक अवस्था चित्रण मात्रै गर्दैन यसको निराकरणका लागि हामी सवैको सामुहिक दायित्व समेत छ भन्ने कुरालाई पुन झक्झकाएको छ । हामी विभेद विरुद्धको सवै अभियानमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै साथ र सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ।
नेपालको संविधान २०७२ले छुवाछुत तथा जातिय भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय मान्दै मौलिक हकमै लिपिवद्ध गरिसकेको छ । हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई यस प्रकारका भेदभाव नगर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौ । अमानवीय छुवाछुत तथा जातिय भेदभावमा संलग्नहरुलाई दण्ड गर्न वनेको ऐन छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ लाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गदै आम स्तरमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न समेत हामी सरकारसंग माग गर्दछौ।
प्रकाश चन्द्र परियार
२६ जेष्ठ २०७५